News - Laser Dahab ah ee Shiinaha Bandhigga Warshadda Casriga ah ee Shiinaha
Mashiinka Goynta Laser Sheet Birta
Saxanka Birta iyo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser
Gacanta Robotic 3D Laser Goynta Iyo Mashiinka Alxanka
Mashiinka Mashiinka Jarida Birta & Birta-birta ah
Golden Laser ee Shiinaha Carwada Caalamiga ah ee Warshadda Casriga ah
Golden Laser oo ah shirkad soo saarta qalabka leysarka ee hormuudka ka ah Shiinaha ayaa ku faraxsan inay ka soo qayb gasho bandhigga 6aad ee Shiinaha (Ningbo) Carwada Caalamiga ah ee Casriga ah iyo Carwada 17aad ee Qaab dhismeedka Shiinaha (Ningbo Machine Tool & Moold Exhibition).
Ningbo International Robotics, Processing Intelligent iyo Industrial Automation Exhibition (ChinaMach) waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waxayna ku xidhnayd saldhiga wax soo saarka Shiinaha. Waa dhacdo weyn oo loogu talagalay mashiinka mashiinka iyo warshadaha qalabka oo ay aqoonsan tahay ayna taageerto Wasaaradda Ganacsiga iyo Dowladda Dadweynaha ee Ningbo. Kooxda iibsadaha ah ee gobolka Yangtze River Delta ee Shiinaha ayaa ah xulashada ugu fiican ee qalabka qalabka mashiinka, otomaatiga, wax soo saarka caqliga leh, iyo soosaarayaasha aaladaha si ay u ballaariyaan suuqa Ningbo, Zhejiang iyo Yangtze River Delta ee gobolka Shiinaha. Waxaa si wada jir ah u soo abaabulay Shiinaha Makiinado Injineeriyada Co., Ltd. iyo Yazhuo Exhibition Service Co., Ltd. Bandhigga Qalabka Qalabka Mashiinka Ningbo ayaa la qaban doonaa isla waqtigaas.
Waxay noqotay wax soosaar roobeed oo aad u saameyn badan, farsameynta caqliga iyo sumadda soosaarida otomaatiga warshadaha, waxaana si ballaaran u ammaanay ganacsiyada.
Golden Laser waxay rabtaa inay lasocoto wareega cusub ee casriyeynta warshadaha iyo xawaaraha koritaanka warshadaha soo baxaya, waxay hirgalisaa istiraatiijiyaddii lagu sameeyay Shiinaha 2025, waxay dhexgashaa oo sahmisaa baahiyaha hal abuurka leh, waxayna abuurtaa fursado cusub oo suuq ah.
Waxaan soo bandhigi doonaa 3 nooc oo mashiinada goynta leysarka fiber:
1: Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka P1260A Si Buuxda Loo Iswada Gaaray
Machine Mashiinka birta tuubada birta ah ee yar yar waxaa loogu talagalay tuubooyinka dhexroorka yar yar (20mm-120mm).
Design Naqshadeynta iswaafajinta, keydinta kharashyada gaadiidka iyo hagaajinta ka faa'iideysiga meelaha warshaddu leedahay.
Ku qalabaysan qalab casri ah oo xawaare sare leh iyo quudinta otomaatig ah, waxay xaqiijin kartaa wax soo saarka otomaatiga ah waxayna hagaajin kartaa wax soo saarka wax soo saarka.
2: Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka P2060B
● Si fudud loo hawlgalo, naqshad gaar ah oo rakibnaan-la'aan ah, oo lagu soo bandhigo adeegga sanduuqa ka baxsan.
Easy La awoodi karo si fudud oo dib loogu kasbado maalgashiga, mashiinka tuubada tuubada laser-ka ayaa la kulmi kara noocyo kala duwan oo farsamooyinka dhuumaha qaabeeya. Kala duwanaanta dhexroorka tuubada tuubadu waa 20mm ilaa 200mm.
3: Aaladda Ultral-sare 12000w Fiber Laser Goynta Mashiinka GF-1530JH ee goynta xaashida biraha
Ability Awoodda goynta leysarka ee xoogga leh, waxay awood u yeelan kartaa inay goyso taarikada birta qaro weyn illaa 60mm.
Technology Teknolojiyada jarista hawada ee cadaadiska yar. Xawaaraha jarista hawadu waa saddex jeer xawaaraha goynta oksijiinta, wadarta isticmaalka tamarta ayaa hoos u dhacay 50%, qiimaha hawlgalkuna wuu hooseeyaa.
Prec Sax sax ah. Jeexitaanka la abuuray inta lagu gudajiray hawsha daloolinta ayaa laga saarayaa inta ugu badan, cirifka goynta waa mid siman oo dhameystiran.
Source Ilaha Shiinaha Laser iyo kantaroole Hypcut saaxiibtinimo oo fududahay in la shaqeeyo iyo qiimaha tartan ee suuqa.
Maxaad sugeysaa Aan tagno carwada oo aan hubino tayada mashiinka.